Ungase ngifuna ezinye isofthiwe ukubethela mahhala kwesitoreji sakho se nom hard drive. Ezinsukwini ezimbalwa edlule, Ngase ngizama ukuthola i-software ye-USB ukubethela kamalume. Kodwa ekugcineni ngazithola sengizibuza ukuthi sifuna kude futhi ukungakunaki lokho okuseza ziseduze. Empeleni, usebenzisa esakhelwe-Windows ithuluzi okuthiwa Idrayivu Yobhalomfihlo iyona engcono njengoba ivikeleke futhi akudingi pay ezengeziwe.
Kanjani amandla Idrayivu Yobhalomfihlo ukubethela USB drive
Okokuqala, kufanele uqinisekise ukuthi uhlelo lokusebenza lekhompyutha yakho yimuphi ukunambitheka-non-ikhaya Windows Vista / 7/8 / 8,1 / 10. Ngoba ekhaya flavour Windows Vista / 7/8 / 8,1 / 10 akudingeki Idrayivu Yobhalomfihlo ithuluzi kuzo. Futhi, iyiphi inguqulo ye-Windows ngaphambi Windows Vista akanayo Idrayivu Yobhalomfihlo i.
1. Ngena ngemvume nge-akhawunti yomphathi Windows wakho.
2. Faka idrayivu ye-USB ekhompyutheni yakho futhi chofoza kabili Lokhu PC kudeskithophu.
3. Chofoza kwesokudla i-idrayivu ye-USB bese uchofoza Vula Idrayivu Yobhalomfihlo i.
4. khetha indlela ufuna ukuvula le drive. Ungasebenzisa iphasiwedi noma ismatikhadi. Lapha ngisebenzisa iphasiwedi ukuvula idrayivu kule ukuboniswa. (Ukusebenzisa iphasiwedi kuyoba lula ngokwengeziwe.)
5. Khetha indlela isipele ukhiye wakho wokutakula. Ungagcina ku-akhawunti yakho ye-Microsoft, ifayela kukhompyutha, noma ukuphrinta ukhiye wokutakula. Ngikhetha ukulondoloza ifayela.
Inothi: Ukhiye wokutakula kuyisihluthulelo isipele ongayisebenzisa ukuze ufinyelele ngekhodi ye-USB drive yakho uma ukhohlwa iphasiwedi yakho noma ulahlekelwe smart card yakho.
6. In the Londoloza Idrayivu Yobhalomfihlo ukhiye wokutakula njengoba ibhokisi, ukhethe indawo londoloza, bese ke uchofoze Londoloza.
7. ku okulandelayo Khetha ukuthi singakanani drive yakho ukubethela ifasitela, khetha Bethela esetshenziswa sediski kuphela, elaliyoba ngokushesha, bese uchofoze Next.
8. Chofoza Qala ukubhala uma usukulungele.
9. Linda kuze inqubo wemfihlo ephelele. Lokhu kuzothatha isikhathi eside, sicela ubekezele.
Indlela ukuvala Idrayivu Yobhalomfihlo i
Yiya Iphaneli yokulawula, ngokucindezela Uhlelo Security, ngokucindezela Idrayivu Yobhalomfihlo i-BitLocker, ke ungakwazi ukubona isimo ukubethela drive ngamunye.
Chofoza Vala Idrayivu Yobhalomfihlo i, bese ke uchofoze ukuqaqa-Drive. Linda kuze inqubo ephelele.
Posted on September 5, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi Idrayivu Yobhalomfihlo i, guqulela
Langaphambilini post Previous: Indlela Yenza Up Phones yakho ye-Android
Next post Next: Indlela Phinda Isuse Idatha kusuka Android Phone yakho